Samsaung Galaxy mini S5570 တွင်ဇော်ဂျီထည့်သွင်းခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » Samsaung Galaxy mini S5570 တွင်ဇော်ဂျီထည့်သွင်းခြင်း
Samsaung Galaxy mini S5570 တွင်ဇော်ဂျီထည့်သွင်းခြင်း
Posted by နည်ရဲဇော် on Sep 12, 2011 in Computer & Cell Phone |7comments
လိုချင်တောင့်တနေတဲ့ Android ဖုန်းလေး ဒီတစ်ခါတော့ မျက်စိမှိတ်ပြီးဝယ်လာခဲ့ပါပြီ။ Samsaung Galaxy mini S5570 လေးပါ။(ကြွားတယ်လို့မထင်ကြစေချင်ပါ) ဒီဖုန်းလေးရကတည်းက ပထမဦးဆုံးကျိုးစားမိတာကတော့ မြန်မာစာသုံးနိုင်ရေး၊ ဇော်ဂျီဖောင့် သုံးနိုင်ရေးပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ Myanmar Tutorial နဲ့ google မှာရှာရင်းဖတ်ရင်း၊ စမ်းသပ်ရင်းနဲ့ အောင်မြင်စွာ မြန်မာစာ သုံးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်လျှင် အရမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူမဟုတ်ပေမယ့် သူများတကာတွေရေးထားတာဖတ်ပြီး ကိုယ်က တခြားလူတွေကိုပြန်မဖြန့်ဝေပေးလျင် ယူပဲယူပြီး ပြန်မပေးတတ်သလို တာဝန်မကျေရာ ခံစားရတာမို့ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သိပြီးတတ်ပြီးသားလူများ သီးခံတော်မူကြပါ။
အဆင့် ၁။ Android ဖုန်းတွေမှာ ဇော်ဂျီဖောင့် ထည့်နိုင်ဖို့ အရင်းဆုံး root လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ root လုပ်တယ်ဆိုတာက Android OS မှာ system admin အနေနဲ့ control လုပ်ခွင့်ရအောင်ပြင်ဆင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁.၁။ root လုပ်ဖို့ အရင်ဆုံး ကိုယ့် pc မှာ အရင်ဆုံး kies software ထည့်ထားရပါမယ်။ ဖုန်းဝယ်ကတည်းကပါလာတဲ့ cd မှာရှိပါတယ်။
၁.၂။ နောက်ပြီး superone click 1.7 ဆိုတဲ့ program လေးဆွဲယူပါတယ်။
၁.၃။ ဖုန်းကို usb နဲ့ ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ပါတယ်။ kies software run လိုက်တဲ့အခါ ဒီလိုတွေ့ပါမယ်။
၁.၄။ ပြီးရင် download လုပ်ထားတဲ့ SuperOneClick ကို zip ဖြေပြီး run ပါတယ်။
၁.၅။ shell root ဆိုတဲ့ button ကို နှိပ်ပါတယ်။ ဒီလိုစာပေါ်လာပါတယ်။
“Device hasatemporary ADB root!
Reboot your device to remove it”
တကယ် reboot လုပ်စရာမလိုပါဘူး။
၁.၆။ ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ test? ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီး Root files have been installed! Would you like to runatest? ပေါ်လာရင် yes ကိုနှိပ်ပါတယ်။
၁.၇။ နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ window တွေကိုလဲ 0k လုပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး “Your device has been rooted!”
“Would you like to donate now?”
Press yes if you want donate or else press no ဆိုတဲ့စာပေါ်လာရင် root လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီ။ usb ဖြုတ်ပြီး reboot လုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ application တွေထဲမှာ superuser ဆိုတာလေးရောက်နေပါပြီ။
၂။ ဒုတိယအဆင့်ကတော့ zawgyi ဖောင့် ထည့်တာပါ။ ဒီ program လေးဆွဲယူပြီးဖုန်းထဲမှာသွင်းလိုက်ပါ။ သူက ဖုန်းရဲ့ system ဖောင့်ကို zawgyi နဲ့ပြောင်းပေးတာပါ။
ကျွန်တော် နောက်ထပ်လုပ်တဲ့အဆင့်တွေလဲရှိပါသေးတယ်။ နှစ်ခုစလုံးကြောင့်လား အပေါ်က တစ်ခုထဲ ကြောင့်ရတာလား မေ့သွားပါပြီး အပေါ်ကတစ်ဆင့်ထည်းနဲ့ရရင် အခုအောက်ကအဆင့်တွေလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။
၂.၁။ wifi ဖွင့်ပြီး android market ကနေ typefresh, astro, Andexplorer စတဲ့ programလေးတွေဆွဲယူပြီး install လုပ်ပါ။
zawgyi ဖောင့်ကို DroidSansFallback.ttf လို့နာမည်ပြောင်းပြီးဖုန်းထဲထည့်ပါ။ type fresh ဖွင့်ပြီး
typefresh ဖွင့်ပြီး DroidSansFallback.ttf ကိုနှိပ်ပေးပါ။ သူက system font ကို နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ ဇော်ဂျီနဲ့လည်းပေးတာပါ။ reboot လုပ်ခိုင်းရင်လုပ်ပါ။
၃။ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ zawgyi pad နဲ့ softkeyboard နှစ်ခုကို download လုပ်ပါ။ android app တွေက .apk ဆိုတဲ့ file extension နဲ့ဆုံးပါတယ်။ သူတို့ကို install လုပ်ချင်ရင် astro ကိုဖွင့်ပြီး သူတို့ရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်သွား၊ click နှိပ်တာနဲ့ install လုပ်မလားမေးရင် ဆက်နှိပ်သွားရပါမယ်။
Install လုပ်ပြီးပါက ဖုန်းရဲ့ Setting ထဲသွားပါ။
Language & keyboard ကိုရွေးပါ။
MyanDroid Soft Keyboard ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။
Attention Box ကို Ok လုပ်ပါ။
All programs ထဲသွားပြီး zawgyipad program ကိုဖွင့်ပါ။
Textbox ထဲကို ခပ်ကြာကြာလေး long press ဖိထားပါ။
Input Method ကိုရွေးပါ။
Select input method Box ထဲမှာ MyanDroid Soft Keyboard ကိုတွေ့ပါလိမ်မယ်။ရွေးပါ။ မြန်မာစာ keyboard ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင်အဆင့်အားလုံးပြီးလို့ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ website တွေဖတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သွားရင်းလာရင်း facebook တို့ gmail တို့ကို မြန်မာလိုရေးနိုင် ဖတ်နိုင်ကြပါပြီ။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
ကျွန်တော်ဟိုလျှောက်စမ်း၊ ဒီလျှောက်စမ်းရင်းနဲ့လုပ်ရတာကို ပြန်ပြီးရေးတာဖြစ်လို့ တစ်ချို့ဟာတွေမမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို comment ထဲမှာ သိတဲ့ဆရာများဝင်ရောက်ပြင်ဆင်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
*** myanmartutorial က ဒီဆောင်းပါးရေးသူနဲ့ အောက်က မှတ်ချက်ပေးသူများရဲ့ကျေးဇူးကို တုန့်ပြန်ပါတယ်။ http://www.myanmartutorials.com/release/keyboard/myandroid-soft-keyboard-zawgyi-beta/
WiFiသုံးမယ် အင်တာနက်ချိတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်မှာမရဘူး
အပေါ်က ပထမနည်းနဲ့ အရင်စမ်းရမှာပဲ
png formatနဲ့ ပုံတစ်ပုံပဲတွေ့တယ်
root လုပ်ခြင်းဟာ အခန့်မသင့်ရင် phone screen dead ဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ထည့်ရေးဖို့မေ့သွားတယ်။ ကျွန်တော်က လုပ်ပြီးမှ အဲဒါကိုသိတာ။
အဲဒီ page ရဲ့အောက်နားလေးမှာ download link လေးတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလင့်တွေကနေယူရမှာပါ။ wifi ကတော့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါကို copy/paste လုပ်လိုက်ရင်လဲရပါတယ်။
Android Samsung S2 Phone ပိုင်ရှင်များအတွက် ဇော်ဂျီ
Samsung S2 တယ်လီဖုန်းကိုင်ဆောင်သူများ Root လုပ်စရာမလိုဘဲ ဇော်ဂျီ Font အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နည်းပါ။
၁။ အရင်ဆုံး non-market application တွေကို allow လုပ်ပေးဖို့Settings/Applications/Unknown sources ကိုသွားပြီး check box မှာ check လုပ်။
၂။ ပြီးရင် Market ထဲမှာ Fontomizer လို့ရိုက်ပြီး search လုပ်။ Font for Galaxy SP ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြီးကို Download လုပ်၊ ပြီးရင် Open လုပ်၊ ဟိုးအောက်ကိုဆွဲချပြီး click to start ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပေါ့။
၃။ A to Z စီထားတဲ့ page တခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲက Z ကိုသွားပြီး Zawgyi_One.apk ဆိုတာလေးကို install လုပ်။
၄။ Install လုပ်ပြီးရင် Applications/Setting/Display/Font Style အဆင့်ဆင့်သွားပြီး ZawgyiOne TTF ကို select လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှန်သမျှ ဖတ်လို့ ရပါပြီ။ ဖတ်မရသေးရင် ဖုန်းကို restart လုပ်ပေးပါ။ (မှတ်ချက်။ ။ အဆင့် ၁ ကနေ ၃ အထိ Android ဖုန်းတိုင်းမှာ ရပါတယ်။ အဆင့် ၄ ဖြစ်တဲ့ Font Style ရွေးချယ်ခွင့်ပါမှ ဒီနည်းလမ်းက အသုံးတည့်ပါတယ်။ အဆင့် ၄ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ ပါမပါ အရင်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်)
@pwint pwint ကျေးဇူးပဲ ကျွန်တော် zawgyi ထည့်ချင်နေတာ မထည့်တတ်လို့
ကျွန်တော် market ဖွင့်တာဖွင့်လို့မရဘူး ပြုတ် ပြုတ်သွားတယ် connection မကောင်းလို့လားမသိဘူး
pwint pwint နည်းလမ်းကပိုလွယ် ပိုကောင်းတယ်။ နောက်တစ်မျိုးထပ်သိရလို့ကျေးဇူးပါ။